Weearo ka dhan ah Shisheeyaha iyo Federaalka iyo Jaajuus puntland laga dilay. – Shabakadda Amiirnuur
March 2, 2021 7:20 am by admin Views: 120
Howlgal gaar ah oo ciidamada Xarakada Mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada Gaalkacyo ee bartamaha dalka Soomaaliya waxey ku dileen askari ka tirsanaa sirdoonka maamulka Puntland kaasoo asigoo dhar cad ah Bulshada ka dhex shaqeynayay.
Jaajuuskaan waxaa la oran jirayay Jamaal Faarax Aadam wuxuuna caan ku ahaa dhibaateynta iyo jaajuusida dadka shacabka Muslimka ah ee ay ka muuqato shacaa irta islaamka.
Geesta kale Wilaayada Baay iyo Bakool waxay Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhiga ciidamad Itoobiya ay ka sameysteen Degmada Xudur waxaa halkaas ka dhacay dagaal culus oo khasaara lagu gaarsiiayy xabashida Itoobiya.
dhinaca kalena a Wilaayada Shabeelaha hoose waxay ciidamada Mujaahidiintu habeenkii xalay dagaallo culus ku qaadeen saldhiga Ciidaamda shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ku leeyihiin Degmada Qoryooley
Sidoo kale Ciidamo ka tirsan Dowladda Federaalka ah ayaa lagu weeraray Deegaanak Lafoole ee Shabeelaha hoose una dhaw Magaalada Muqdisho.
dhanka kale Jubada hoose xalay Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxay weerar culus ku qaadeen Saldhiga Ciidamada Kenya ee deegaanka Qooqaani waxaa deegaankaas ka dhacay dagaal khasaare kala duwan lagu gaarsiiyay Kenyaatiga.